MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA DALMATIAN IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Dalmatian iyo Sawirro
Ku dheji Dalmatian da'da 4 sano
Liiska eeyaha Dalmatian Mix Breed
Eey Gawaarida Leopard
Ey Tababar La Soo Bartay
Dalmatian waa eey weyn, xoog badan, oo muruqyo leh. Qalfoofku wuxuu qiyaas ahaan le'eg yahay inta uu dheer yahay, oo wuu ku fidsan yahay dusha sare. Afku wuxuu u eg yahay dhererka dhakada. Joogsigu waa dhexdhexaad laakiin si fiican ayaa loo qeexay. Sanka ayaa noqon kara madow, bunni (beerka), buluug ama cirro madow oo u eg madow. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha wareega ee dhexdhexaadka ah waa bunni, buluug ama isku dar labadaba. Dhegaha ayaa sare loo taagay, hoos ayey u laalaadeen, si tartiib tartiib ah ayey u taabanayaan caarada wareegsan. Laabta ayaa qoto dheer. Saldhiga dabada ayaa la siman dusha sare iyo taabashada caarada. Cagaha waxay ku wareegsan yihiin suulasho qaanso leh. Ciddiyaha caguhu waa cadaan iyo / ama madow eeyo madow oo madow ah iyo bunni iyo / ama caddaan eyda beerka lagu arko. Koodhka gaaban wuxuu leeyahay timo cufan oo wanaagsan. Koodhka isku dhejisan ayaa u badan caddaan leh dhibco wareega oo si cad loo qeexay. Dhibcuhu waxay noqon karaan madow ama bunni (beer) kuwaas oo ah midabada doorbidaya giraanta bandhiga, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan, liin, buluug mugdi ah, midab leh, jilicsan, cad ama adag. Dhammaan midabadan lama aqbali karo giraanta showga, laakiin waxay ku dhacaan nooca. Inbadan oo qeexan oo sifiican uqaybinta calaamadaha ayaa ah, eey ka sii qiimo badan yihiin eeyga giraanta showga. Eydu waxay dhashaan gebi ahaanba caddaan dhibcihiisuna way soo baxaan goor dambe.
Dalmatians waxaa loo soo saaray inay ka hoos ordaan ama ay weheliyaan gawaarida faraska la raaco sidaas darteedna waxay leeyihiin xoog iyo taag. Ma jecla inay fadhiistaan ​​maalinta oo dhan iyaga oo aan haysan wax ay qabtaan. Iyagu waa ciyaareyaan, faraxsan yihiin, hawl fudud yihiin oo aad u heellan. Dalmatian waxay ubaahantahay hogaamin farabadan oo ay weheliso wehelnimada aadanaha si loogu farxo. Sifiican ugama bixi doonaan ardaaga maalinta oo dhan waxaana lagu yaqaanay inay qodan godad xajmi leh markii ay sidaas sameeyaan. Dalmatian wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro carruurta, laakiin haddii aysan helin wax ku filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed waa laga yaabaa noqo mid heer sare ah , aadna ugu fiican cunugga yar. Soo uruurinta tamarta ayaa maskaxdooda ku keenta inay xasilloonaadaan waxayna noqon karaan xishood la'aan la'aan is dhexgalka bulshada . Waxay si fiican u wadaagaan xayawaanka kale , laakiin iyada oo aan loo baahnayn isgaarsiinta alfa ee aadamuhu halka uu aadamuhu si cad ugu sheego eeyga inuusan isagu mas'uul ka ahayn oo dagaalku yahay dhaqan aan loo baahnayn, waxay ku noqon karaan kuwo dagaal badan eyda qalaad. Aad u caqli badan, laakiin noqon kara ula kac haddii ay dareemaan in milkiilayaashooda ay ku jiraan wax yar oo qabow ama dadban , iyo / ama haddii milkiiluhu yahay si hagaagsan ula xiriirin eeyga . Guud ahaan waxay ku fiicantahay tababarka adag, joogtada ah. Dalmatian waa la tababari karaa ilaa heer sare oo addeecid ah. Iyaga waa loo tababbari karaa difaaca waana ilaaliyaal wanaagsan. Kala badh dadka qaata eeyaha yar yar ee Dalmatian kama hayaan sanadka ugu horeeya. Dhallinyarada Dalmatiansku waa kuwo firfircoon, waxayna u baahan yihiin qaddarin hoggaamineed iyo jimicsi. Haddii aad siiso waxa ay si dabiici ah ugu baahan yihiin, socod maalinle ah oo eeyga looga sameeyo ciribta cirifka dhinaciisa ama gadaashiisa bini'aadamka, marna hortiisa qofka haya hogaaminta, iyo mid aad u adag, laakiin aan aheyn hogaan adag, waxay sameyn doonaan xayawaan la yaab leh iyo wuu degi doonaa dhawr sano ka dib. Dadka iyaga ku sii haya wakhti ku filan si ay uga gudbaan marxaladooda firfircoon waxay u muuqdaan kuwo aad u faraxsan. Haddii aad ka fikireyso inaad korsato Dalmatian yar yar hubi inaad haysato waqti, awood lagugu leeyahay oo aad awood u leedahay. Haddii aadan taas ku siin karin iyaga waxay noqon doonaan kuwo aad u sarreeya, oo ay adag tahay in la maareeyo iyo wax duminaya . Haddii aad tahay qof firfircoon oo waqti leh, oo og waxa loola jeedo inaad noqoto hoggaamiye xirmo markaa Dalmatian ayaa kugu habboon adiga.
Dhererka: Ragga 22 - 24 inji (50 - 60 cm) Dumarka 20 - 22 inji (50 - 55 cm)
Miisaanka: qiyaastii 55 rodol (25 kg)
Dhago la'aanta tarankaani waa mid aad u sareysa qiyaastii 10-12% waa dhagoole ku dhashay . Eyda yar yar ee 'Dalmatian' ah waa in lagu tijaabiyaa BAER dhago la'aan markay tahay 6 usbuuc, iyo eeyaha dhagaha la'a oo dhan waa in lagu daayaa ama la dhexdhexaadiyaa. In kasta oo taranka eeyo yaryar ee dhagoolayaashu ay tahay in laga fogaado, haddana aad bay suurtogal u tahay in la koriyo a ey sifiican loo hagaajiyay . Ku dhajinta dhagxaanta kaadi-mareenka, maadaama heerarka uric acid ee Dalmatians ay guud ahaan ka sarreeyaan nooc kasta oo kale, mararka qaarkoodna ay keento xannibaadda kaadi-mareenka. Sidoo kale u nugul xasaasiyadda maqaarka, sida fiilooyinka synthetic ee roogagga iyo gogosha.
Dalmatian ma ahan eey ku habboon dadka deggan guryaha mooyee haddii aan loo bixin karin socod deg deg ah ama socon karin dhowr jeer maalintii. Iyagu gudaha way firfircoon yihiin waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Kuma haboona inaad ku noolaato banaanka cimilada qabow.
Tani waa eey aad u firfircoon oo leh awood aad u weyn. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, dheer, socod degdeg ah ama ku orod meesha eygu ka samaysan yahay ciribta dhinac ama gadaashiisa qofka haysta hogaanka. Marna hore ha u dhigin, sida dareenku u sheego eeyga inuu hoggaamiyaha hoggaaminayo jidka, hoggaamiyahaasna wuxuu u baahan yahay inuu noqdo aadanaha. Intaa waxaa sii dheer, waxay u baahan tahay fursad badan oo ay ku ordo, oo laga doorbido xarigga aagga nabdoon. Haddii eeyahaas loo oggol yahay inay caajisaan, oo aan maalinna la socon ama la orod, waxay noqon karaan kuwo wax dumiya oo bilaaba inay soo bandhigaan dhibaatooyin badan oo xagga habdhaqanka ah. Waxay jecel yihiin inay ordaan!
Badanaa way weyntahay, ma ahan wax aan caadi aheyn in hal ilaa liter lagu haysto ilaa 15 arday.
Dalmatianku wuxuu daadiyaa sanadka oo dhan laakiin wuxuu si aad ah u sameeyaa laba jeer sanadkiiba. Caday si joogto ah si aad uga caawiso maaraynta daadinta joogtada ah. Ma laha ur eyga u eg oo waxaa la sheegaa inay nadiif yihiin oo xitaa iska ilaaliyaan kudka. Maydho oo keliya markii loo baahdo.
Waxaa jira ismaandhaaf guud oo ku saabsan asalka noocyadan. Eeyaha baraha leh waxaa lagu yaqaan taariikhda oo dhan Afrika, Yurub iyo Aasiya. Taranka ayaa laga yaabaa inuu xiriir la leeyahay Tilmaamaha. Raadadka eeyaha dhibcaha leh waxaa laga helaa mastaafooyinka Masaarida iyo friisyada Hellenic, sidaa darteed hubaal waa nooc hore. 1700 eey loo yaqaan tilmaamaha Bengal, oo la mid ah Dalmatian, ayaa ka jiray England, isagoo su'aal ka keenay asalka Yugoslavia ee Dalmatian. Qaarkood waxay ku andacoodaan in Dalmatian uu yahay nooc Croatian ah. Dadaalo loogu jiray in loo aqoonsado inay yihiin Croatian breed waa la diiday, ilaa 1993, markii FCI ay ugu dambeyntii aqoonsatay xididada Croatian ee eyga Dalmatian, in kasta oo ay sii wadayaan inay diidaan xuquuqda masruufka caadiga ah ee Croatia ee ku aaddan taranka. Qarniyadii dhexe waxaa loo adeegsan jiray dabin. Noocani wuxuu caan ku noqday sida eeyaha gawaarida 1800s. Waxay ku tunteen fardo iyo gaadhifardood agtiisa, iyagoo si kalsooni leh u raacaya sayidyadoodii, iyagoo ilaalinaya gaadhiga iyo fardaha intii uu sayidku meel kale ku sugnaa. Aad u adag oo leh awood adag, waxay awood u yeelatay inay si fudud ula socoto in sayidkiisu uu lugeynayo, ama faraska, ama gaariga lagu raacayo. Dalmatian isku dhafan ayaa arkay adeegsiyo badan, sida mascot loogu talagalay dab-damiska, sarkaalka dagaalka, Ey qabyo ah, sameeyaha circus, ugaarsade xayawaan ah, raaciyaha qalabka dab-damiska, eeyga shimbirta, hound raadinta, retriever, adhijirka iyo sida eey waardiye ah.
Ku siiya eyga Dalmatian ee ka yimid Hindiya qiyaastii 3 bilood jir— 'Don wuxuu jecel yahay inuu ku dhex ordo kanaalladeyda sidoo kale wuxuu jecel yahay inuu kubad ku ciyaaro. Waxa kale oo uu jecel yahay boodboodka dheer iyo buskudka. Wuxuu necbahay daawada iyo dadka qalaad.
Ey yar oo Dalmatian ah - Sawir waxaa iska leh David Hancock
Molly ka Dalmatian
Leo the Dalmatian oo 6 bilood jira oo la ciyaaraya saaxiibkiis Dalmatian-milkiilayaashiisa ayaa leh, Runtii waa runti eey kacsan . '
Snickers iyo Kandee, laba reer Dalmati ah dhammaantood way koreen— 'Kandee, waa midab bunni ah (midig), dhanka bidixna waa Snickers, oo madow leh. Labadooduba waxay fiirinayeen gabal digaag ah waxaan isweydiinayay yaa noqon doona eeyga wanaagsan ee fariista oo si ficil ah udhaqaaqa sidaa darteed wuxuu qaadan doonaa gabalkii digaagga, waana wax lagu qoslo sida ay labadooduba is ag fadhiisteen, iyagoo wax isla falcelintii, taas oo iga yara yara wareerisay cidda guuleysan doonta. Taasi run ahaantii waxay igu qasabtay inaan u sameeyo weel dhan oo digaag ka buuxo waa inaan cadaalad noqdaa lol.
Eeg tusaalayaal badan oo Dalmatian ah
Sawirada Dalmatian 1
Sawirada Dalmatian 2
Sawirada Dalmatian 3
Eeyaha Dalmatian: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
min pin dawac terrier mix
dawaco terrier shih tzu mix
waxa ey ey leeyihiin carrab buluug ah
SUNTZU shih iyo muqisho yorkie
iskudhafka shiinaha jack russell mix
schnauzer yar iyo isku darka poodle